जेठ १३, कालिकोट । शनिबार बेलुकी रुकुम पश्चिम चौरजहारी नगरपालिका-८ सोतीमा दलिय युवामाथि ज्यादती भएको भन्दै कालिकोटका युवाले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
मंगलबार लकडाउनमा बजार सुनसान रहेका बेला कालिकोटका युवाहरुले हातमा प्लेकार्ड लिएर दलितमाथि हुने विभेद अन्त्य गर, रुकुममा दलितमाथि ज्यादती गर्नेहरुलाई कानुनी कारबाही गर जस्ता नाराबाजीसहित विरोध प्रर्दशन गरेका हुन् ।
बजारमा विरोध प्रर्दशन पछि प्रतिमा चौकमा आयोजित विरोधसभामा लिंलासैनी युथ क्लव कालिकोटका अध्यक्ष हिक्मत मल्लले एक्काइसौं सताब्दीमा पनि दलित समुदायमाथि हुने विभेद अन्त्य नभएको भन्दै सरकारले रुकुमामा दलितमाथि ज्यादती गर्नेहरुलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न माग गर्नु भएकाे छ ।
उहाँले भन्नु भयाे, ‘मुलुकमा संविधान बनेको छ । दलितका हक अधिकार काजगमा प्रसस्तै छन् । तर न्याय हराएजस्तो जगन्य अपराधका घटनामा कमी आएको छैन् । उहाँले भन्नु भयाे, ‘अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धले दलितको मृत्यु कहिलेसम्म ? छुवाछुत र भेदभाव अन्त्य गरौँ भन्ने नारा नारामा मात्र किन सीमित ? भन्दै प्रश्न गर्नु भयाे ।
उहाँले भन्नु भयाे, ‘आरक्षणको कुरा गर्ने वित्तिकै हलो जोत्ने गरिब बाहुन र ज्वइलर्स पसल गर्ने धनी सुनारको कुरा ल्याउँछन् । हामीलाई आरक्षण चाहिएन, धन आफै कमाउँला, बरु गरिबै रहौंला, समाजमा समान रुपमा घुलमिल हुन दिए पुग्छ।’
कार्यक्रममा अगुवा युवा भरत शाहीले रुकुममा दलित युवामाथि आकर्मण गरी ज्यान लिनेलाई आजीवन कैदको सजाय हुनुपर्ने बताउनु भयाे । उहाँले भन्नु भयाे, ‘दलित युवाको ज्यान लिनेलाई सरकारले कडा कारबाही गरोस्। घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरियोस। दलितको रगतमा केसैले राजनीति गर्ने अवस्था न‌ओस्। यस घटनाका दोषीको कारबाहीले मुलुकमा दलितलाई हुने विभेदको अन्त्य हुने अवस्था सिर्जना होस् । प्रेम गर्दा ज्यान लिन पाइदैन्।’
मल्ल थरकी युवतीलाई लिन गएका दलित युवा र गाउँलेबीच झडप हुँदा बेपत्ता तीनजना युवाको शव फेला परेको छ । अझै ४ जना बेपता छन् । विरोधमा उत्रिएका युवाले भने, ‘ वेपत्ता युवाहरुको खोजी गरियोस् । सोतीमा गाउँले र युवाहरुबीच झडप हुँदा ज्यान गुमाएका भेरी नगरपालिका-४ नवराज विक र चौरजहारी नगरपालिका-१ टीकाराम सुनार र भेरी नगरपालिका-४ गणेस बुढाको परिवारलाई न्याय र उचित राहत दिइयोस्।
उनीहरुले दोषीमाथि हदैसम्मको कारवाही नभए युवाले थप सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । वर्गीय मुक्तिका लागि लडिएको भनिएको जनयुद्धको केन्द्र र जातीय छुवाछुत मुक्त जिल्ला घोषणा समेत गरिएको रुकुम पश्चिम यस्तो दुखद घटना घट्नुले अन्तराष्ट्रिय जगतमा पनि मुलुकको शीर निहुरिएको उनीहरुको भनाइ थियो ।